Indlela yokuHamba kwiWindows 7 ngeWindows Explorer
I-Windows Explorer sisixhobo esiphambili osisebenzisayo ukusebenzisana neWindows 7. Kuya kufuneka usebenzise iWindows Explorer ukujonga iilayibrari zakho, iifayile kunye neefolda. Ungangena kwiWindows Explorer ngokunqakraza kwimenyu yokuQala kwaye ucofe ikhompyuter okanye enye yeefolda zakho ezininzi, ezinje ngamaXwebhu, Imifanekiso, okanye uMculo.
Ezi zixhobo zilandelayo zenza kube lula ukusebenzisa iWindows Explorer:
Ipaneli yokuhamba. Kwicala lasekhohlo leWindows Explorer yefestile, unokucofa into ukuze ubone iifayile ngaphakathi. Izinto ezikwiPaneli yokuKhangela zinokubandakanya iifolda (ezinje ngoKhuphelo); uluhlu lweeFavorites; iilayibrari zeWindows 7 (ezinje ngamaXwebhu noMculo); ezinye iikhompyuter kwiqela lakho lasekhaya; ezinye ukuqhuba kwikhompyuter yakho; okanye ezinye iikhompyuter kwinethiwekhi.
Sebenzisa ibha yokuhambisa iscrumb ukuhamba. Cofa ii-wedges phezulu kwiWindows Explorer yefestile ukukhetha kwiifolda ezikhoyo.
m amphet ityuwa 5 mg
I-Windows 7 ayinalo iqhosha leFolda yeNqanaba eliPhezulu elifumaneka kwiWindows XP. Nangona kunjalo, uhlala unyuka kwinqanaba elinye kwiWindows 7 ngokubamba iqhosha le-Alt kwaye ucofe utolo oluphezulu. Kwakhona, ifolda inqanaba elinye phezulu ngokwesiqhelo libonakala kwisonka sokwaphezulu, ukuze ucofe apho.
Iinkcukacha ibhokisi. Ukuba ucofa ifayile okanye ifolda kube kanye, iinkcukacha zayo ziyavela kwibhokisi yeenkcukacha ezantsi kweWindows Explorer yefestile.
Umyalelo webha. Uninzi lwezenzo onokufuna ukuzenza zidweliswe kwi-Command bar. Ezinye izinto ezininzi ziyafumaneka ngokunqakraza ekunene kwifayile okanye kwifolda.
Ibha yemenyu efihliweyo. Ukuba ucofa i-Alt, iWindows Explorer ikubonisa ibha yemenyu endala (Ifayile, uHlelo, ukuJonga, izixhobo, uNcedo) kwiinguqulelo zangaphambili zeWindows ezinemisebenzi emininzi ekude nayo.
Xa iWindows Explorer ivula okokuqala, uya kubona umbono weeMpawu ezinkulu. Nangona inomdla, ukuba ujonga kwifolda equlathe iifayile ezininzi, uya kufuna ukutshintshela kwinkangeleko yeenkcukacha (cofa iqhosha lokujonga kwaye ukhethe Iinkcukacha). Uya kubona uluhlu oluncinci ngakumbi olufuna ukuskrola okuncinci.
I-Windows Explorer iqala ngokujonga i-Icon enkulu.
Olunye uncedo lokujonga iinkcukacha kukuba unokuluhlela uluhlu lweefayile ngokunqakraza kwenye yezihloko zekholamu -Igama okanye uMhla oGuquliweyo, umzekelo. Ungacofa ekunene kwesinye sezihloko zekholamu kwaye ukhethe ngakumbi ukutshintsha ukuba zeziphi iikholamu ezibonakalayo.
Zonke iiwindows Explorer zefestile zinamaqhosha kwikona yayo ephezulu ngasekunene, ecaleni kophawu loNcedo, ekuvumela ukuba uvule indawo yokujonga kuqala - umtya kwicala lasekunene lewindow ethi, kwiimeko ezininzi, ibonise imbonakalo ifayile oyikhethileyo. Olu luphawu olupholileyo kodwa olucothayo. Ngaphandle kokuba uyifuna ngokwenene, uya kufuna ukucima indawo yokujonga kuqala.
Ngaba i-zyrtec ikwenza wozele
med kagqirha weemigraines
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga ze-nortriptyline
duloxetine dr 60 mg njengezingxobo
iziphumo ebezingalindelekanga zeepilisi ze-estradiol
I-singulair ye-10 mg yecwecwe